बिदेशिएका नेपालीमा भाषा र संस्कृतिमा देखिएको विचलन - Enepalese.com
बिदेशिएका नेपालीमा भाषा र संस्कृतिमा देखिएको विचलन
इनेप्लिज २०७१ माघ २९ गते ३:१३ मा प्रकाशित
प्रसंग भर्जिनिया स्थित एक पारिवारिक भेटघाटको ! अमेरिकामा परिवार तथा आफन्तजनहरू बिचको भेटघाटको महत्व निकै नै ठूलो हुन्छ ! चाड पर्व होस वा अन्य समारोह महिनामा एक पटक जमघट नगरे सारै न्यास्रो लाग्छ ! यसै जमघटको सिलसिलामा मैले दुई जना ४ बर्षे बच्चाहरू खेल्दै गरेको देखे। यी दुई बच्चाहरू आपसमा बोल्नु पर्दा एक आपसमा ईसारा गरेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो र तिनका अभिभावक संग मैले यस बारेमा जिज्ञासा राखे ! ति दुई मध्ये एक नेपालमा जन्मिएको र अर्कों अमेरिकामा, यी दुई काका बडावा का छोराहरू रहेछन ! अचम्मको कुरा चैं अमेरिकामा जन्मिएकोले नेपालीमात्र बोल्न जान्ने तर नेपालमा जन्मेकोले अंग्रेज़ी मात्र बोल्ने ! त्यसैले एक आपसमा बोलेको कुरा दुवै दाजु भाईले नवुझ्ने भएकाले दुबैले ईसाराको माध्यमले कुरा वुझ्ने गरेका रहेछन ! मैले जिज्ञासा राखे किन नेपालमा जन्मिएकोले नेपाली बोल्न नजानी अंग्रेज़ीमात्र बोल्छ ? अनी अमेरिकामा जन्मेकोले अंग्रेज़ी बोल्नुको साटो नेपालीमात्र बोल्छ ? यहॉ भएछ के भने नेपालमा जन्मेकोले अमेरिका आउनु अगी राम्रो नेपाली बोल्ने र बुझ्ने गर्थ्यो तर पछी अमेरिका आए पछी छोराले स्कुलमा अंग्रेज़ी जान्दैन होला भनेर घरका सवैले अंग्रेज़ी मैं बोल्ने र उस्लाई अंग्रेज़ी मात्र सिकाउन सुरू गरे पछी छोराले एक बर्षमा नेपाली नै विर्सेछ ! अर्कों तर्फ अमेरिकामा जन्मेकोलाई चैं पछी गएर नेपाली बोल्न र बुझ्न जान्दैन भनी हजुरबुवा, हजुरआमाले नेपाली पढाउने, लेख्न सिकाउने, गितहरू गाउन सिकाउने लगायत अन्य नेपाली संस्कार सिकाउने काम भएकाले उस्ले सवै नेपाली सिकेछ !
अमेरिका बस्ने र पढ़ने बच्चाको लागी हामी नेपालीले अंग्रेज़ी सिकाउनुको कुनै अर्थ र महत्व हुदैन किनकी हाम्रो अंग्रेज़ी बोलाईमा दुरूस्तता हुदैन बरू उनीहरूले आफ्नो स्कुलमा नै राम्रो अंग्रेज़ी सिक्दछन ! अंग्रेज़ी नै प्रमुख भाषा भएकाले केटा केटीले स्कुलमा वोल्न जान्दैनन भनी चिन्ता गर्नु बेकार हो ! महत्वपूर्ण कुरा चैं आफ्ना बच्चालाई सानै उमेरमा नै नेपाली भाषा र संस्कार सिकाउनु हो जसले पछि सम्म नेपालीपनको परिचय दिन्छ र उस्ले बिर्सन पनि सक्दैन ! यसमा पारिवारिक रहन सहन र घरेलू व्यवहारले बच्चाहरूको विकासक्रमा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ ! बच्चाको स्मरण शक्ति बडो तेज हुन्छ र उस्ले भनेको र सिकाएको कुरा निकै छिटो टिप्न र स्मरण गर्न सक्दछ ! त्यसैले प्रत्येक अविभावकले आफ्ना बच्चाहरूको विकासक्रमा धेरै ध्यान दिनु आवश्यक छ ! विदेशीएका नेपालीहरूको लागी आफ्नो भाषा, संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न धेरै ठूलो चुनौती छ ! बिभिन्न टेक्नोलोजीको बैज्ञानिक बिकासक्रम संगै मानव समाजको बिकासक्रम, व्यवहार, चालचलन र कामगर्ने तौर तरिकामा समेत व्यापक परिवर्तन आएको छ ! तर यस परिवर्तनलाई आधार बनाएर आफ्नो पहिचान नै गुमाउनु चैं ठूलो मुर्खता हुनेछ ! यसका लागी हामीले निम्नतम तलका बुंदामा मात्र ध्यान पुर्याउन सक्यौ भने केहि मात्र भए पनि आफ्नो भाषा र संस्क्रितिको जगेर्ना गर्न सकिन्छ कि?
१) घरमा स-परिवार नेपालीमा नै बोल्ने र संगै खाना खाने वानी गर्नु होस!
२) घरमा आफुले मान्ने भगवानको फ़ोटो वा मुर्ति राख्ने गर्नु होस!
३) छोरा छोरीलाई पटक पटक आफ्नो भाषा, संस्कृति, रहनसहन, स्थान, नातागोताका बारेमा जानकारी गराउनु राम्रो हुन्छ!
४) आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसार मन्दिर. गुम्वा, मस्जिद, चर्च आदि जस्ता धार्मिक स्थानमा छोरा छोरीलाई संगै लिएर जानु होस!
५) आफन्तहरूको भेटघाटमा छोरा छोरीलाई संगै लिएर जॉदा उनीहरूले नयॉं वातावरणमा रमाउने र नयॉं कुरा सिक्ने अवसर पाउने छन !
६) आफुले मान्ने चाढ पर्व हरुमा छोरा छोरीलाई पूर्ण जानकारी सहित सहभागी गराउनु होस, यसवाट उनीहरूले आफ्नो संस्कृति बुझ्ने र सिक्ने छन !
७) छोरा छोरीलाई ज्ञानबर्धक पढ़ाई र खेलका सामाग्री उपलब्ध गराई विविध शैक्षिक तथा मनोरन्जनात्मक कार्यक्रममा व्यस्त गराउंदा टिवि तथा ट्यावलेटहरूमा लाग्ने लतमा नियन्त्रण गर्न सकिनेछ !
८) छोरा छोरिको सामुन्ने झुक्किएर पनि नराम्रो भाषा र शव्दहरू नवोल्नु होला यसवाट उनीहरूले नराम्रो कुरा सिक्ने सम्भावना हुन्छ !